Tenacity waa furaha guusha: kuwa dhinacna ilaaliya intaad ku guda jirtid guuldarooyinkaaga waa kuwa mudan inay kula Joogaan inta lagu guda jiro guusha, “Guusha waxay leedahay saaxiibo badan”
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 16, 2019 00: 40 No Comments
Guushu waxay daliil u tahay dhammaan dariiqadii aan ku guuleysan lahayn: Wax adduunka ka socda oo ma beddeli karaan joogitaan, adkeysi iyo go'aan. Cidina kuma guuleysato iyadoon qatar gelin. »
Cabsida khatarta ayaa la mid ah guuldaraysiga. Si kale haddii loo dhigo, qofna ma guuleysto isagoo aan qaadin khatar.
Waxaan ogaadey in noloshu aysan u qalmin ilaa aad qatar geliso mooyee. "Waxa fiican in la higsado kaamilnimo oo aan halmaamo intii aan higsan lahayn dhexdhexaadnimada oo aan gaarno".
Wada shaqeyn la'aan, weligaa ma dhammeysan doontid, markaa samee waxa aad jeceshahay, halis gal, ha ka cabsan inaad ku guuldareysato, ha ka cabsan inaad ku guuldareysato, ha ka baqin inaad ku riyootid weyn, laakiin xusuusnow in riyooyinoyinka aan lahayn yoolalka ay yihiin uun riyooyin aan lahayn guulo.
Dekaba, ku fashilmay 100 jeer taas (KL) Noqo guul laakiin 101ème jeer ahaa qarxay of (KL). Waxaa la yaab leh, cidina kama hadasho 100 jeer oo uu ku guuldareystay, in isaga kaligiis la iska daayay. Qof kastaa wuu ku qanacsan yahay inuu ka hadlo kaliya guusha uu gaadhay, isaga 101ème jeer maxaa yeelay yoolkiisu wuxuu ahaa inuu guuleysto, isaguna wuu ku guuleeystay.
Walaalayaal qaaliyow, ha yeelinwaxay leeyihiin Ha ka baqin inaad ku dhacdo. Tijaabad kasta oo guuldareystay waa hal talaabo oo udhow guusha. Waa inaad qatar gelisaa. "Sababtoo ah qof kasta oo aan wax khatar ah galin waxba ma haysto".
Oct01 10: 41